WARARKII UGU DAMBEEYEY-Somaliland iyo Khaatumo oo Ku Dagaalamay Tukaraq.
Puntlandnews.net (Laascaanood)-Wararkii ugu dambeeyey ee anu ka helayno gobolka Sool ayaa sheegaya in dagaal khasaare sababay uu xalay ka dhacay deegaanka Tukaraq oo ay muddo isku horfadhiyeen ciidanka Puntland iyo Somaliland.
Dagaalkaan oo wararku sheegayaan inuu sababay khasaare kala duwan ayaa deegaanka Tukaraq ku dhexmaray ciidamada xoraynta deegaanka oo horay Khaatumo uga tirsanaa haddana la safan Puntland iyo kuwa maamulka Somaliland.
Dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqlayeen dhawaqa hubka culus oo ay labada dhinac iswaydaarsanayeen, walow aysan jirin cid labada dhinac katirsan oo si rasmi ah uga hadashay dagaalka iyo khasaaraha soo kala gaarey.
Warar hoose ayaa sheegaya in dagaalkaani bilowday kadib markii ay ciidanka xoraynta deegaanku wadada u galeen ciidamo Somaliland leedahay oo saldhig bedelasho ka samaynayey deegaanka Tukaraq.
In ka badan hal sano iyo bar ayaa ciidamada Puntland iyo Somaliland isku horfadhiyaan deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool oo ay sanad kahor ka dheceen dagaalo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.